CCP + SATCON ရှိ IP-based Facility နှင့် AXF စံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ SMPTE အစည်းအဝေးများပြုလုပ်လိမ့်မည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE CCW + SATCON မှာ IP ကို-အခြေခံပြီး Facility နှင့် AXF နျ Standard အပေါ် Sessions Host မှ
SMPTE CCW + SATCON မှာ IP ကို-အခြေခံပြီး Facility နှင့် AXF နျ Standard အပေါ် Sessions Host မှ
SMPTE ရွေးကောက်ခံသမ္မတရောဘတ် Seidel နှင့်အက်စ် Merrill Weiss သည်ဥက္ကဋ္ဌ SMPTE AXF အပေါ်အလုပ်အဖွဲ့, Panel ကိုဆွေးနွေးချက်များဒေသကိုသုံးသပ်တော်မူမည်
White Plains, နယူးယော့ - အောက်တိုဘာ 30, 2014 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က (R) (SMPTE(R)), ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့နယူးယောက်မြို့ရဲ့မှာ, နိုဝင်ဘာ 12-13 CCW + SATCON အတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာ Javits ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ, ထို IP ကို-based စက်ရုံနှင့်တစ်ဦး In-depth session တစ်ခုအပေါ်တစ်ဦး panel ကဆွေးနွေးမှုမှတဆင့်ပေါ် CCW + SATCON နှင့်အတူပူးတွဲထုတ်လုပ် SMPTE'' s ကိုမကြာသေးမီက AXF စံထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
SMPTE ရွေးကောက်ခံသမ္မတရောဘတ် Seidel, CBS မှာအင်ဂျင်နီယာနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ "ဟု The IP ကို-အခြေခံပြီး Facility အဲဒီ session အလယ်အလတ်ပါလိမ့်မယ်: ဒါဟာသင့်အတွက်လား? ဒီတော့မှန်လျှင်, ဘယ်အချိန်မှာ? "9 မှာကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာ 13 အပေါ်ဖြစ်၏။ ဟောပြောမာရီယို Vecchi, PBS မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာအရာရှိချုပ်တို့ပါဝင်သည်တော်မူမည် စတိဗ် Fastook, CNBC မှာနည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ; နှင့်ယင်းကိုယ်စားပြု SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများအုပ်စု, မိုက်ကယ် Koetter, Turner မှာမီဒီယာနည်းပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ။ အဆိုပါအုပ်စုတွင်ကွန်ယက်မှာအဓိကအခြေခံအဆောက်အဦများဖြစ်ပေါ်နေသောဘယ်လိုဆွေးနွေးကြမည်နှင့်မည်သို့အပြည့်အဝအိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံ software ကို-defined ကွန်ယက် (Sdn) မှပြောင်းရွှေ့လာမယ့်ငါးနှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် SMPTE'' s ကို 2022 အိုင်ပီကွန်ယက်ကျော်အသံနှင့်ဗီဒီယိုပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် switching များအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများ၏မိသားစု (ST-2022-1 မှတဆင့် ST-2202-7) အဖြစ် networks မီဒီယာ (JT-မိုင်) တွင်ပူးတွဲ Task Force သတ်မှတ်ပေးဖို့ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက် ရဲ့ IP-based စက်ရုံများ၏အနာဂတ်။
"SMPTE ယနေ့အထိအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချို့ကိုဆွေးနွေးရန်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အလားအလာဖန်တီးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးအမျိုးမျိုး၏သိုလှောင်မှုမှ CCW + SATCON မှာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် lineup စုဆောင်းနေပါတယ် "ဟု Seidel ကဆိုသည်။ "ဒီအစည်းအဝေးများယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်၏မီဒီယာအဆောက်အပုံဖော်သည့်နည်းပညာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းသို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်ပူဇော်ဖို့ကတိပေး။ "
"အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ၏ပံ့ပိုးမှုများတွင်: အဆိုပါနယူးမော်ကွန်းတိုက်ဖလှယ်ရေး Format ကို (AXF) စံ," 10 ဘို့စီစဉ်ထား: နိုဝင်ဘာ 15 အပေါ် 13 နံနက်, အက်စ် Merrill Weiss သည် Merrill Weiss Group မှ LLC ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်များ၏ကုလားထိုင်များကတည်းဖြတ်ကြလိမ့်မည် SMPTE AXF အပေါ်အလုပ်အဖွဲ့။ Weiss နှင့်ပါဝင်သူများ၏အဖွဲ့အစည်းများအမျိုးမျိုးကနေလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ - အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကွန်ရက်များကနေယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက်မှ - ဒေတာ archive ကိုစနစ်များအကြားအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစံချိန်စံညွှန်းများ codifies သော AFX စံ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်သိုလှောင်မှုမှလေးစားမှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အတူအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ထွန်းပုံကိုဆွေးနွေးကြမည် ။ ဟောပြောဂျိမ်း Snyder, ကွန်ဂရက်စာကြည့်တိုက်မှာအကြီးတန်းစနစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူကထောက်ခံ; ဘရိုင်ယန် Campanotti, တပ်ဦးဆင်ဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာအရာရှိချုပ်; နှင့်ပေတရု Symes မှာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏ဒါရိုက်တာ SMPTEအကြောင်းအရာပုံစံများနှင့်သိုလှောင်မှုနည်းပညာကိုပြောင်းလဲပေမယ့်မရရှိနိုင်ဖြစ်နေဆဲနိုင်အောင်, Weiss အနာဂတ်-အထောက်အထားဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုမှလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်ဆွေးနွေးမှုများအဖြစ် AXF ၏အသုံးပြုမှုကိုဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆှေးနှေးခအတွင်းမှာပဲဟောပြောကိုလည်း AXF အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များမဟာဗျူဟာမြောက်လမ်းအတွက် AXF ဒိုမိန်းသို့၎င်းတို့၏လက်ရှိ archive ကိုစနစ်များအနေဖြင့်အကြောင်းအရာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုဘယ်လိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
CCW + SATCON အကြီးဆုံးမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, ဗီဒီယို, နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အရှေ့ကမ်းရှိဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကွန်ဖများနှင့် Exposition ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှကျော်လွန်တက်ရောက်ထားပါတယ်။ CCW + SATCON အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.ccwexpo.com.
အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE နှင့်၎င်း၏အလုပ် www မှာရရှိနိုင်ပါသည်။smpte.org ။
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) (များ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းSMPTE(R))
အော်စကာ (R) နှင့် Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏သူဟာ Emmy (R) ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရလူ့အဖွဲ့အစည်း (R) (SMPTE(R)), တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသင်းအဖွဲ့, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ဉီးအနုပညာရဲ့တိုးအတွက်ခေါင်းဆောင်, သိပ္ပံ, နှင့်ပုံရိပ်၏ယာဉ်, အသံ, နှင့် metadata ဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်း SMPTE တိုးတက်လာရွေ့လျား-ပုံရိပ်ပညာရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆက်သွယ်ရေးကိုဖြတ်ပြီး, နည်းပညာ, မီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ။ 1916 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက SMPTE အဆိုပါထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် SMPTE motion Imaging ကဂျာနယ်နှင့် 800 စံချိန်စံညွှန်းများ, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များထက်ပိုမိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သုတေသီများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ - - ကမ္ဘာအနှံ့ကဏ္ဍများအတွက်ဖြည့်ဆည်းသူ Society ကထက်ပိုမို 6,000 အဖွဲ့ဝင်များကထောကျနေသည်။ ယင်းနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မိတ်ဖက်မှတဆင့် ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (R) (HPA (R)), ဒီအဖွဲ့ဝင်, ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, ကိရိယာများနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများကိုအဘယ်သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းကပြည့်စုံစေသည် နှင့်အခြားပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာအကြောင်းအရာ။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org / join ။
CCW + SATCON အကြောင်းအရာ SMPTE Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က သိုလှောင်ခြင်း 2014-10-31
ယခင်: ChyronHego အကြောင်းအရာမှာထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာ့ဖလား (CCW):
နောက်တစ်ခု: ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ် Biamp စနစ်များအမည်များ Kiley Henner - တိုက်ရိုက်ဒီဇိုင်း